အစောပိုင်း orbitofrontal cortex နှင့်နှိုင်းယှဉ်သော accumbens ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအပြုအမူများ (2006) - Your Brain On Porn
orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်များတွင် (2006) အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်
J ကို neuroscience ။ 2006 Jun 21;26(25):6885-92.
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, ယုန်က TA, Parra အဒေီ, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, ကာဇီ BJ.
အဆိုပါ Developmental Psychobiology များအတွက် Sackler Institute မှ, ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်က Weill အတှကျဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်, နယူးယောက်, New York က 10021, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအပြုအမူများဖြင့်သေစေနိုင်သောရလဒ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကဆုလာဘ် - ရှာဖွေခြင်းအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရအာရုံကြောစနစ်များ၏ neurobiological ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူ ၃၇ ယောက် (အသက် ၇-၂၉ နှစ်) သည်အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးများကိုတိုင်းတာ။ ထိန်းချုပ်သည့်ပါရာဒိုင်းတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ဤဒေသများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှမောင်းနှင်ပုံရသောကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြီးထွားလာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် prefrontal လုပ်ဆောင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းပမာဏသည်ပုံကြီးချဲ့ထားသော်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်တန်ဖိုးများကိုဆုချရန်အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည့်အရွယ်ရောက်သူများနှင့်တူသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင် orbital frontal cortex လှုပ်ရှားမှုသည်အရွယ်ရောက်သူများထက်ကလေးများနှင့်ပိုမိုတူသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရရင့်ကျက်သော subcortical systems များသည်နောက်ပိုင်းတွင်အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်များကိုရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးထွားမှုမရှိဘဲ activated ဖြစ်လာသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုစတင်ခြင်းမကြာခဏ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်-တာကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ငွေရောင် et al ။ , 2004) ။ Little ကတိုးမြှင့်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေမှဆယ်ကျော်သက် predispose စေခြင်းငှါ neurobiological အချက်များနှင့် ပတ်သက်. ယနေ့အထိလူသိများသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် mesolimbic ဒေသများ (ဆုလာဘ်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီKnutson et al ။ , 2001; Elliott သည် et al ။ , 2003; လူယာ et al ။ , 2004), အန္တရာယ်-ယူပြီး (Kuhnen နှင့် Knutson, 2005) နှင့်စွဲလမ်း (Hyman နှင့် Malenka, 2001; Volkow et al ။ , 2004), ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကဤစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးမှဆွေမျိုးဆုချမှတိုးမြှင့် Response တစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလသောယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အထူးသကျနော်တို့ subcortical ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု [ဥပမာနျူကလိယ accumbens (NACC)] prefrontal မှဆွေမျိုး [ဥပမာ Orbital တိုကျရိုကျ cortex (OFC)] ဒေသများတွင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်တိုးရှင်းပြကူညီရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤကာလရဲ့အနှစ်သာရကစခွေငျးငှါရှိမရှိဆန်းစစ် ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အမူအကျင့်စည်းမျဉ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ frontostriatal circuitry ၏ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ Periadolescent ကြွက်များကို (striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related dopamine ဂီယာအတွက်တိုးမြှင့်ပြသLaviola et al ။ , 1999), နှင့် nonhuman မျောက်ဝံများကို (prefrontal cortex (PFC) တွင်တိုးမြှင့် dopaminergic innervation ပြသRosenberg ကနှင့် Lewis က, 1994, 1995) ။ လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (frontostriatal ဒေသအပြောင်းအလဲများပြသGiedd et al ။ , 1999; Sowell et al ။ , 1999; ကာဇီ et al ။ , 2005) (တိုးလာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး Parallel ဟန်ကြောင်းကာဇီ et al ။ , 1997; ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ et al ။ , 2000; Luna et al ။ , 2001; Luna နှင့် Sweeney, 2004; Steinberg, 2004) ။ ဤအပြောင်းအလဲများ (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပျံ့မှ ပို. focal စုဆောင်းမှုမှ prefrontal ဒေသ activation ဆိုင်းပြသရန်ပေါ်လာကာဇီ et al ။ , 1997; Bung et al ။ , 2002; တဖန်မောရှေအား et al ။ , 2002; Durston et al ။ , 2006) ။ Neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (ဥပမာ Synaptic တံစဉ်များကို, myelination) ၏ယန္တရားရဲ့အနှစ်သာရလို့မရပါဘူး။ သို့သော်ဤအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုသနျ့နှင့်ရငျ့နေစဉ်ယင်းဦးနှောက်ဒေသများထံမှအပြန်အလှန်စီမံကိန်းများချော-tuning ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤအနက်ကိုသာမှန်းဆသည်။
မကြာသေးမီက neuroimaging လေ့လာမှုများ (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ဆုလာဘ်-related အပြောင်းအလဲနဲ့ဆနျးစစျဖို့စတင်ခဲ့ကြပြီးလူကြီးများမှာပြထားတဲ့အတိုင်း NACC activation ပြခဲ့ကြBjork et al ။ , 2004; May et al ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2005) ။ သို့သော်ရလဒ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများလှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားပုံကိုမှအဖြစ်ရောစပ်ပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်အတွက်အဓိကအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ OFC ထက် accumbens ၏ဒေသအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ထို့အပွငျနည်းနည်းအာရုံကိုလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ NACC နှင့် OFC ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ characterizing ခံရပြီ။ ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုခြေရာခံခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အစီရင်ခံအပြောင်းအလဲများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤကာလမှတိကျသောသို့မဟုတ်ရင့်ကျက် linear ပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်နောက်ထပ်အခက်အခဲပေးပါသည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးတန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရေးဆုချဖို့အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဆနျးစစျဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်အတွက်ယခင်အစီရင်ခံစာများ (ပေးသော NACC နှင့် OFC အပေါ်အာရုံစူးစိုက်Hikosaka နှင့် Watanabe, 2000; Pecina et al ။ , 2003), ပုံရိပ် (O'Doherty et al ။ , 2001; Zald et al ။ , 2004) နှင့်စွဲလမ်း (Hyman နှင့် Malenka, 2001ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုအတွက်သူတို့ကို implicating) လေ့လာမှုများ။ ကြွက်မော်ဒယ်များ (အပျေါအခွခေံLaviola et al ။ , 1999; လှံ, 2000) နှင့်ယခင်ပုံရိပ်အလုပ် (Ernst et al ။ , 2005), ကျနော်တို့ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက်အထက်မှအောက်သို့ PFC ဒေသများတွင်လျော့နည်းရင့်ကျက် Active နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်, ဒီကာလအတွင်း accumbens အတွင်းသန့်စင်ပြီး focal Active ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များတစ်ပုံကြီးချဲ့ accumbens တုံ့ပြန်မှုကိုပြသလိမ့်မည်ဟုသောတွေးဆ။
တဆယ်ခြောက်ကလေးများ (ခုနစျပါးအမျိုးသမီး;7နှစ်ပေါင်းယုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူအသက် 11-9.8,), 13 မြီးကောင်ပေါက် (ခြောက်လအမျိုးသမီး; 13 နှစ်ပေါင်းယုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူအသက် 17-16,), နှင့် 12 Right-ပေးအပ်ကျန်းမာလူကြီးများ (ခြောက်လအမျိုးသမီး; အသက် 23 နှစ်ပေါင်းယုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ 29-25,) ကို fMRI စမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ အရွယ်ရောက်သူအချက်အလက်ပေါ်တစ်ဦးကသီးခြားစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့သည်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) ။ အလွန်အကျွံလှုပ်ရှားမှု (>2မီလီမီတာ) ကြောင့်ကလေးသုံးယောက်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ပါဝင်သောဘာသာရပ်နှစ်ခု (ကလေးတစ် ဦး နှင့်အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး) အတွက်မည်သည့် ဦး တည်ချက်အတွက်မဆိုလှုပ်ရှားမှု> 0.5 voxels (1.56 mm) ရှိသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဤဘာသာရပ်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်ရလဒ်များကိုမပြောင်းလဲစေဘဲကွဲပြားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများသည်လေယာဉ်ရွေ့လျားမှုတွင်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ (အရွယ်ရောက်သူများ - x = 0.48, y = 0.76, z = 0.49; မြီးကောင်ပေါက်: x = 0.26, y = 0.58, z = 0.45; ကလေးများ: x = 0.18, y = 0.76, z = 0.36) ။ ဘာသာရပ်များအာရုံကြောသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါရောဂါမရှိသမိုင်းခဲ့ရပြီးတစ်ဦးချင်းစီကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်က Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်များ၏ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုတဲ့ protocol ကိုများအတွက်အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက် (ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်သားသမီးတို့အဘို့မိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်ကလေးအစွမ်း) ကိုပေး၏။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ကလေးများအပေါ်စမ်းသပ်မှုသူတို့ကအမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းသူတို့စကားကိုနားထောငျမညျ့အသံနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ပြီးသောအတွက်စမ်းသပ်မှု, ရှေ့မှာမပြောင်လှောင်စကင်နာအတွက် simulated ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုယခင်က nonhuman မျောက်ဝံများ (များတွင်အသုံးပြုနေတဲ့နှောင့်နှေးတုန့်ပြန် Two-ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြCromwell နှင့် Schultz, 2003) နှင့်ယခင်ကဖော်ပြထား (သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related fMRI လေ့လာမှုမှာ (သဖန်းသီး။ 1) ။ ဒီတာဝန်အတွက်, (counterbalanced) သုံးခုတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးကွဲပြားဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသတိပေးခံရတဲ့အခါ cue သည်ထင်ရှားရာအပေါ်ဘက်ညွှန်ပြပေးရန်နှင့်အမှားလုပ်မပါဘဲတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်တုံ့ပြန်ရန်သူတို့ရဲ့အညွှန်းကိန်းသို့မဟုတ်လက်ခလယ်ဖြစ်စေနှိပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။
အမူအကျင့်ပါရာဒိုင်း။ panel ကို Left, သုံးတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးစဉ်ဆက်မပြတ်ကြွင်းသော (ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced) တစ်ဦးကွဲပြားဆုလာဘ်တန်ဖိုးတွဲခဲ့ကြသည်။ ညာဘက် panel ကိုက The ပါရာဒိုင်းယာယီ 12 s ကို ITI နှင့်အတူအချိန်အတွက်ကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့ cue, တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်များပါဝင်သည်။ စုစုပေါင်းရုံးတင်စစ်ဆေးအရှည် 20 ့ခဲ့သည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းနှိုးဆွ parameters တွေကိုခဲ့ကြသည်။ သုံးပင်လယ်ဓားပြကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုတစျခု (1000 ms များအတွက်လက်ဝဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗဟိုပြု fixation ၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်စေအပေါ် Pseudorandom နိုင်ရန်အတွက်တင်ဆက်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1) ။ တစ်ဦး 2000 ms နှောင့်နှေးပြီးနောက်ဘာသာရပ်များအတွက် fixation နှစ်ဖက်စလုံးတွင်နှစ်ခုဘဏ္ဍာကိုရင်ဘတ်တစ်တုံ့ပြန်မှု prompt ကို (2000 ms) ဖြင့်တင်ပြခြင်းနှင့်ပင်လယ်ဓားပြတို့သည် fixation ၏လက်ဝဲဘက်မှာသို့မဟုတ်လျှင်သူတို့ဘက်၌တရားလက်ညှိုးနှင့်အတူတစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့သည် အဆိုပါပင်လယ်ဓားပြတို့သည် fixation ၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်ခဲ့သည်ဆိုပါကသူတို့ဘက်၌တရားလက်ခလယ်။ အခြား 2000 ms နှောင့်နှေးပွီးနောကျ, ဒင်္ဂါးပြား၏ဖြစ်စေ၏တုံ့ပြန်ချက်ဆုချတဲ့, အသေးစားအလတ်စား, ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုမျက်နှာပြင် (1000 ms) ၏အလယ်ဗဟိုတွင်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပင်လယ်ဓားပြတစ်ဦးကွဲပြားဆုလာဘ်ငွေပမာဏနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး 12 s ကို intertrial ကြားကာလ (ITI) နောစုံစမ်းရာစတင်မှီရှိခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းရုံးတင်စစ်ဆေးအရှည် 20 ့ခဲ့သည်။ သူတို့တစ်တွေတုန့်ပြန်စေရန်ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ, သူတို့မှားယွင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပါလျှင်ဘာသာရပ်များဆုခခြဲ့မဟုတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်အချိန်တွင် error message ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များလေ့လာမှုမှာပါဝင်မှုများအတွက် $ 50 အာမခံချက်ပေးခဲ့သည်များနှင့်သူတို့တာဝန်အပေါ် (တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းကဲ့သို့) စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်. ပိုမို $ 25 အထိဝင်ငွေနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။ အကျိုးကိုပမာဏအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်အဖြစ်ထင်ရှားစွာကွဲပြားခြားနားကြပေမဲ့ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုများကာလအတွင်းဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်ပိုက်ဆံရေတွက်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤတတ်နိုင်သမျှအာရုံကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုခငျြသောကွောငျ့, တစ်ဦးချင်းစီဆုလာဘ်၏အတိအကျကိုတန်ဖိုးဘာသာရပ်မှထုတ်ဖော်မခံခဲ့ရပါဘူး။ လှုံ့ဆော်မှုသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (MR) စကင်နာများနှင့်တစ်ဦး fiber optic တုံ့ပြန်မှုစုဆောင်းခြင်းကိရိယာ၏ထွင်းဖေါက်အတွက်အရည်ကြည်လင် display ကိုဗီဒီယိုက display ကို အသုံးပြု. ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်စနစ် (PST, Pittsburgh, PA) နဲ့တင်ပြခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီကို 18 မိနှင့်6s ကိုကြာမြင့်ရာငါး 8 စမ်းသပ်မှုတွေ၏ပြေး (ခြောက်လအသေးစား, အလတ်စားအသီးအသီးများနှင့်ကြီးမားသောဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေ), ပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြေးကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်ပေးအပ်ချင်းစီဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုခြောက်စမ်းသပ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြေး၏အဆုံးမှာဘာသာရပ်များသူတို့ကပြေးနေစဉ်အတွင်းရရှိခဲ့ဖူးမည်မျှငွေအပေါ်မှာ updated ခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေပိုက်ဆံပမာဏကိုအားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းကြီးအားလုံး (စမ်းသပ်မှုတွေ၏ 100% အပေါ်ဆုခခြဲ့) အားဖြည့်တဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အချိန်ဇယားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစတင်ခင်မှာ, ဘာသာရပ်များသူတို့လှုံ့ဆျောမှုသေချာစေရန်ဝင်ငွေနိုင်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံပြသခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအသုံးပြုတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအကျွမ်းတဝင်မပါဝင်ကြောင်းအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဥပမာ, ဘာသာရပ်များသုံးခုတွေကိုပြသသုံးယောက်ဆုလာဘ်သူတို့စမ်းသပ်ချက်စဉ်အတွင်းမြင်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းပမာဏသည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့တွေကိုပုဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောဘယ်လိုပြောပြသည်မခံခဲ့ရပါ။ ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသုံးဆုလာဘ်၏ပမာဏ, တဦးတည်းအသေးဖြစ်ခြင်း, အခြားအလတ်စားနှင့်အခြားကြီးမားသောရှိခဲ့သည်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ဒင်္ဂါးပြား၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်နှင့်အတူတိုးပွါးကြောင့်ဤပမာဏစမ်းသပ်မှုများတွင်အမြင်အာရုံသိသာဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု၏အဆုံးမှာဘာသာရပ်၏ debriefing စဉ်အတွင်းဒီအသင်းအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်ပြီးအတိအလင်းတောင်းဆိုတဲ့အခါတစ်ဦးတည်းသာဘာသာရပ်, တိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ပမာဏအကြားအသင်းအဖွဲ့တို့အကြားနိုင်ဘူး။
imaging တစ် quadrature ခေါင်းကိုကွိုင်သုံးပြီး 3T General Electric (Milwaukee, WI) MRI စကင်နာကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ functional Scan ဖတ် (sequence ကိုနှင့်ထဲကလိမ်သုံးပြီးဝယ်ယူခဲ့သည်ဂလိုဗာနှင့် Thomason, 2004) ။ အထပ်ထပ်အချိန် (TR), 2000 ms;: အဆိုပါ parameters များကိုအောက်ပါတို့ပါဝင်သည် ပဲ့တင်သံအချိန် (TE), 30 ms; 64 × 64 matrix ကို; 295မီလီမီတာ Coronal ချပ်; 3.125 × 3.125 မီလီမီတာ In-လေယာဉ် resolution ကို; တစ်ခုချင်းစီကိုပြေး၏အစအဦးမှာလေးစွန့်ပစ်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများအပါအဝင် 90 အထပ်ထပ်အဘို့, 184 °လှန်လိုက်ပါ။ သုံးဖက်မြင်အပြင်မှာရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဲ့သို့တူညီသောနေရာခန္ဓာဗေဒ In-လေယာဉ် T1 မာန်တင်း Scan ဖတ် (500 မီလီမီတာအချပ်အထူ; TE, မိ; 256 × 256;; အမြင်လယ်ပြင်, 200 မီလီမီတာ TR, 5) စုဆောင်းခဲ့ကြ high-resolution ၏ဒေတာအစုကိုပုံမှန်ပြည်နယ်ပုံရိပ်တွေအတွက် gradient ကို-ပြန်ပြောပြဝယ်ယူလုယူ (; TE, 25; TR,51.5 မီလီမီတာအချပ်အထူ; 124 ချပ်) ။
အဆိုပါ Brainvoyager QX (ဦးနှောက်တီထွင်, Maastricht, အဆိုပါနယ်သာလန်) software ကိုအထုပ်ပုံရိပ်အချက်အလက်များ၏ကျပန်း-သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခင်မှာအောက်ပါ preprocessing လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစိုပုံရိပ်တွေအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်: တင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့်ပထမဦးဆုံးအသံအတိုးအကျယ်အားလုံးကို volumes ကို၏ Spatial alignment ကိုများကသေးငယ်တဲ့ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအဘို့အ detect နှင့်မှန်ကန်သောမှသုံးရှုထောင်ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်း, အချပ်စကင်ကိုအချိန်ဆုံးမခြင်း (ကတည်းက Interpol သုံးပြီး ), linear လမ်းကြောင်းသစ်ဖယ်ရှားရေး, High-Pass နှင့်အချိန်သင်တန်းနှုန်းသုံးခုသို့မဟုတ်နည်းပါးလာသံသရာ၏ nonlinear ပျံ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ယာယီ filtering ကိုများနှင့်ဝက်အများဆုံးမှာ4မီလီမီတာအပြည့်အဝအကျယ်နဲ့ Gaussian kernel ကို အသုံးပြု. ချောမွေ့ Spatial ဒေတာ။ ဘာသာရပ်များဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းဘို့ခန့်မှန်းခြေလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ချက်လှုပ်ရှားမှုများကို2မီလီမီတာထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပါဘူး။ functional ဒေတာအမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ရရှိရန်သက်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ကို manual ချိန်ညှိ၏ alignment ကိုနေဖြင့်ခန္ဓာဗေဒအသံအတိုးအကျယ်မှ coregistered ခဲ့ကြသည်ပြီးတော့ Talairach အာကာသသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ functional voxels 48.83 မီလီမီတာ၏ဝယ်ယူ voxel အရွယ်အစားကနေ interpolated ခဲ့ကြသည်3 1 မီလီမီတာတစ် resolution ကိုမှ3 Talairach အသွင်ပြောင်းကာလအတွင်း။ အဆိုပါ NACC နှင့် OFC Talairach နေဖြင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရခြင်း (Duvernoy ဦးနှောက် Atlas မှရည်ညွှန်းနှင့် တွဲဖက်. ကိုသြဒိနိတ်Talairach နှင့် Tournoux, 1988; Duvernoy, 1999).
ကနဦး omnibus ယေဘုယျ linear မော်ဒယ် (GLM) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (NACC နှင့် OFC) ဆုချမှအထိခိုက်မခံဒေသများဆုံးဖြတ်ရန်အားလုံးဘာသာရပ်များနှင့်တစ်ခုလုံးကိုရုံးတင်စစ်ဆေး (pretrial အခြေခံမှဆွေမျိုး) ကိုဖြတ်ပြီးအားလုံးပြေးပါဝင်သည်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအသက်အရွယ်အုပ်စုတူဒေသများပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြကြောင်းသေချာစေရန်သီးခြား GLM ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအခြေခံဆနျ့ကငျြဘနှိုင်းယှဉ်အကျိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီး NACC နှင့် OFC အတွက် activation ပြသခဲ့သည်။ ဤအဒေသများ Localization နောက်ထပ် Talairach အားဖြင့်သီးခြားစီအုပ်စုတိုင်းအဘို့ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် (အ Duvernoy ဦးနှောက် Atlas မှရည်ညွှန်းနှင့် တွဲဖက်. ကိုသြဒိနိတ်Talairach နှင့် Tournoux, 1988; Duvernoy, 1999) အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့။ ယခင်အတိုင်းအတာများအလုပ် (လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခေတ်ကာလဖြတ်ပြီး hemodynamic တုံ့ပြန်မှုများ၏ stereotactic မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အချိန်သင်တန်းထပ်တူထပ်မျှမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသထားပါတယ်Burgund et al ။ , 2002; Kang et al ။ , 2003) ။ နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် post ကို hoc ထူးခွားသညျ့အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီပြီးတော့အတူတူအားလုံးအုပ်စုများအဘို့ဤကနဦး omnibus GLM နှင့်အတူဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာဒေသများတွင်အပေါ်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခု ဆက်စပ်. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် NACC နှင့် OFC မှာရှိနိုင်ပါ (ဖြည့်စွက်ပုံ။ 1 ၌လေ့သုံးခုစလုံးအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး activated သော voxels ဖော်ထုတ်ကြောင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည် www.jneurosci.org as ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း) ။ အဆိုပါတွဲဖက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ဖော်ထုတ်အကျိုးစီးပွားအဆိုပါဒေသများကနဦး omnibus GLM နှင့်အတူဖော်ထုတ်သူတို့နှင့်အတူခေနှင့် post ကို hoc စမ်းသပ်မှုအထက်ပါဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အတူရရှိသောသူတို့အားအဖြစ်အလားတူသက်ရောက်မှုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
မြေတပြင်လုံး-အုပ်စုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, omnibus GLM (5 × 37 ဘာသာရပ်များပြေး = 185 တစ်ခုလုံးကိုရုံးတင်စစ်ဆေးတလွှားအားလုံးပြေး၏ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် zအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်သင်တန်းများ -normalized) နှင့်မူလတန်းခန့်မှန်းအဖြစ်ဆုလာဘ်ပြင်းအားနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါခန့်မှန်းသည့် hemodynamic တုံ့ပြန်မှု (တစ် linear မော်ဒယ်နှင့်အတူ (တာဝန်တင်ဆက်မှု၏ volume အတှကျ 1 ၏တန်ဖိုးနှင့်ကျန်ရှိသောအချိန်မှတ်0တစ်အသံအတိုးအကျယ်ယူဆ) တစ်ခုစံပြရထားတှဲတုံ့ပြန်မှု convolution ဖြင့်ရရှိသောခဲ့ကြသည်Boynton et al ။ , 1996) နှင့်စမ်းသပ်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်သင်တန်း၏ဒီဇိုင်းကို matrix ကိုတညျဆောကျလေ့ရှိတယ်။ သာမှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည့်ခဲ့ကြသည်များနှင့်သီးခြားခန့်မှန်းအမှားစမ်းသပ်မှုတွေဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ 1130 သားသမီးတို့အဘို့ (အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုမှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုတွေ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုခဲ့သည်n မြီးကောင်ပေါက်အဘို့အ = 13), 1061 (n လူကြီးများအတွက် = 12), နှင့် 1067 (n = 12) ။ သားသမီးတို့အဘို့စမ်းသပ်မှုတွေ၏နည်းပါးလာအရေအတွက်ကိုတစ်ဦးအပိုဆောင်းကလေးကဘာသာရပ်အပါအဝင်ခြင်းဖြင့်တညျ့ခဲ့သည်။
post ကို hoc ဆနျ့ကငျြဘဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထို့နောက်အပေါ်အခြေခံပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြ t အဆိုပါ NACC နှင့် OFC အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုဒေသသိရှိနိုင်ဖို့ခန့်မှန်း၏βအလေးအပေါ်စမ်းသပ်မှု။ Contrast ကျပန်း-သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်နှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ MR signal ကိုအတွက်အချိန်စီးရီးများနှင့်ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးကိုရုံးတင်စစ်ဆေး (18 s) ကို2s ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်ခြင်းရှေ့ fixation ၏ရန်ဆွေမျိုး (စုစုပေါင်းရုံးတင်စစ်ဆေးကြာချိန် 20 ့ခဲ့) ၏တစ်ဦးချင်းစီဒေတာအချက်ကိုဖြတ်ပြီး, အဖြစ်အပျက်-related ပျမ်းမျှအားကျော်သိသိသာသာတက်ကြွ voxels အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့ကြသည် အဆိုပါဆနျ့ကငျြဘဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှရရှိသော။ အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုဒေသအတွက်စုဆောင်း voxels အရေအတွက်၏တွက်ချက်မှုဟာ GLM အထက်တွင်ဖော်ပြထားအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအပေါ်ကောက်ယူလေ့လာဆန်းစစ်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။
မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ချက် (AFNI အတွင်း AlphaSim အစီအစဉ်ကိုသုံးပြီး run ခဲ့ပြီးသော Monte Carlo Simulator, အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်ကော့, 1996), တစ်ဦးကိုဆုံးαအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်သင့်လျော်သောတဆက်တည်းတံခါးခုံကိုဆုံးဖြတ်ရန် p <0.01 (Forman et al ။ , 1995) 450 မီလီမီတာတစ်ရှာဖွေရေးအသံအတိုးအကျယ်ပေါ်တွင် အခြေခံ.3 အဆိုပါ NACC သည်။ တစ်တညျ့αအဆင့်အထိ p <0.05 ၏ OFC အတွက်ရှာဖွေရေးအသံအတိုးအကျယ် ∼25,400 မီလီမီတာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်3 (Forman et al ။ , 1995) ။ OFC activation ၏ပိုပြီးတင်းကြပ်တံခါးခုံကိုဆက်လက်ရှင်သန်ဘူး p <အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး <0.01 ။a
အဆိုပါပုံရိပ်အချက်အလက်များ၏ omnibus GLM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် NACC [ညာဘက် (ဖော်ထုတ်x = 6, y = 5, z = -2) နှင့် left (x = -8, y = 6, z = -2)] နှင့်ညာဘက် OFC (x = 46, y = 31, z = 1) တွင်ဖော်ပြပါရှိသည် ပုံ 2, A နှင့် C, နောက်တစ်ကြိမ်စမ်းသပ်မှု (အခြေခံဆနျ့ကငျြဘ vs ဥပမာဆုလာဘ်) ၏စတင်ရှေ့အပု 18 s ကို intertrial ကြားကာလမှဆွေမျိုးတစ်ခုလုံးရုံးတင်စစ်ဆေး (2 ့), များအတွက်စမ်းသပ်မှုအပေါငျးတို့သဘာသာရပ်များနှင့်ပြေးတလွှားမူလတန်းခန့်မှန်းအဖြစ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအတူ။ ဤအဒေသများအတွင်း, ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတစ်ဦးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါသည် (F(2,72) = 8.424; p = 0.001) (သဖန်းသီး။ 2B) ကို NACC အတွက်, ဒါပေမယ့်မ OFC အတွက် (F(2,72) = 1.3; p = 0.44) (သဖန်းသီး။ 2D). post ကို hoc t အဆိုပါ NACC များအတွက်ဆုလာဘ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်စမ်းသပ်မှု (ကြီးများနှင့်အသေးစားအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုအတည်ပြုt(36) = 4.35; p <0.001), အကြီးစားနှင့်အလတ်စား (t(36) = 2.01; p <0.05) နှင့်အလတ်စားနှင့်အသေးစား (t(36) = 2.09; p <0.04) သာ။ ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်များအတွက်သာ။ ကြီးမြတ် activation နှင့်အတူဆုလာဘ်။
နျူကလိယ accumbens ၏ Localization (A) နှင့် Orbital တိုကျရိုကျ cortex (Cဆုချမှ) activation ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတစ်ဦးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်B) [ညာဘက် (x = 6, y = 5, z = -2) နှင့် left (x = -8, y = 6, z = -2)] သော်လည်းမလက်ျာဘက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် Orbital တိုကျရိုကျ cortex အတွက် (x = 46, y = 31, z = 1) (D) ။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင် SEM ဖော်ပြသည်။ ခရေပွင့အသေးစားနှင့်အလတ်စား, အလတ်စားနှင့်အကြီးစားနှင့်အသေးစားနှင့်အကြီးစားအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုဖျောညှနျး။
ဤလေ့လာမှု၏အာရုံဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးဘယ်လိုဆုလာဘ်လွှမ်းမိုးမှုအာရုံကြောစုဆောင်းမှုအပေါ်ကြောင့်ကျနော်တို့ accumbens နှင့်အကြီးဆုံးဆုလာဘ်မှစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အ OFC လှုပ်ရှားမှုများ၏ပြင်းအားနှင့်အတိုင်းအတာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ MR signal ကိုတစ်ရာခိုင်နှုန်းကအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးစမ်းသပ်ချက် (18 စမ်းသပ်မှုတွေ =2ဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှခဲ့သောချက်ချင်းရုံးတင်စစ်ဆေး (90 s) ကိုရှေ့ fixation ၏ intertrial ကြားကာလမှပထမဦးဆုံး 900 ့ရုံးတင်စစ်ဆေးဆွေမျိုးများ၏ဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ပြင်းအားတွက်ချက်ခဲ့သည် Scan ဖတ်) ။ ဤသည်တွက်ချက်မှုအသီးအသီးအုပ်စုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှု၏အတိုင်းအတာအတူတူဆနျ့ကငျြဘသုံးပြီး, အုပ်စုအသုံးပြုပုံပြေးတလွှားလှုပ်ရှားမှု၏အသံအတိုးအကျယ် (voxels ၏နံပါတ်) အဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ accumbens နှင့် OFC ခုနှစ်, MR signal ကိုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကအပြောင်းအလဲအတွက်သိသာထင်ရှားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု (ရှိခဲ့F(2,22) = 6.47, p <0.01; F(2,22) = 5.02, p အသီးသီး = 0.01,) (သဖန်းသီး။ 3A,B) ။ အဆိုပါ accumbens မှာတော့မြီးကောင်ပေါက်အကြီးမြတ်ဆုံးအချက်ပြမှုပြောင်းလဲမှုပြသခဲ့သည်။ post ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ (မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ကလေးများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုအတည်ပြုt(11) = 4.2; p = 0.03) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများ (အကြားt(11) = 5.5; p accumbens လှုပ်ရှားမှု၏ပြင်းအားအတွက် = 0.01) ။ အဆိုပါ OFC ခုနှစ်, post ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ (ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုအတည်ပြုt(11) = 4.9; p = 0.01) နှင့်ကလေးများနှင့်လူကြီးများ (t(11) = 3.99; p = 0.01) ။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါ accumbens အတွက်ပိုကောင်းလှုပ်ရှားမှုပြသနှင့်ဤပုံစံဟာ OFC နှင့်ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှများထံမှကွဲပြားပါတယ်။
ဆုချမှ accumbens နှင့် OFC လှုပ်ရှားမှု၏ပြင်းအားနှင့်အတိုင်းအတာ။ A, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဟာ accumbens အတွက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှကြီးမားသောဆုလာဘ်ဆွေမျိုးမှ MR signal ကိုအတွက်ပုံကြီးချဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲပြသခဲ့သည်။ Bအဆိုပါ OFC များတွင်ကလေးများသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများမှ MR signal ကိုဆွေမျိုးအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါတယ်။ C, ကလေးများသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens အတွက်လှုပ်ရှားမှု၏အကြီးဆုံးအသံအတိုးအကျယ်ပြသသည်။ D, ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ဖို့ OFC ဆွေမျိုးအတွက်လှုပ်ရှားမှု သာ. ကြီးမြတ်အသံအတိုးအကျယ်ပြသသည်။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင် SEM ဖော်ပြသည်။ ခရေပွင့ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်အကြားသိသာထင်ရှားသော activation ကွဲပြားခြားနားမှုဖျောညှနျး A; မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်ဆွေမျိုးသားသမီးများအတွက် သာ. ကြီးမြတ် activation B; မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်ဆွေမျိုးသားသမီးများအတွက်လှုပ်ရှားမှု သာ. ကြီးမြတ်အသံအတိုးအကျယ် C; လူကြီးများအတွက်ဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်မှဆွေမျိုးသားသမီးများအတွက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပိုမိုအသံအတိုးအကျယ် D.
အဆိုပါ accumbens အတွက်လှုပ်ရှားမှု၏အတိုင်းအတာအတွက်သိသာထင်ရှားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု (ရှိခဲ့သည်F(2,22) = 4.7; p <0.02) နှင့် OFC (F(2,22) = 5.01; p = 0.01) ။ post ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ ((503 ± 43 voxels interpolated) မြီးကောင်ပေါက်မှဆွေမျိုး (389 ± 71 voxels interpolated) ကလေးများများအတွက် accumbens အတွက်လှုပ်ရှားမှု၏အကြီးဆုံးအသံအတိုးအကျယ်ကိုအတည်ပြုt(22) = 4.2; p <0.05) နှင့်လူကြီးများ (311 ± 84 interpolated voxels) (t(22) = 3.4; p <0.05) (သဖန်းသီး။ 3C) ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများ (ကွာခြားခဲ့ပါဘူးt(22) = 0.87; p = 0.31) ။ အဆိုပါ OFC အဘို့, သားသမီး (864 ± 165 voxels interpolated) (t(22) = 7.1; p = 0.01) နှင့်မြီးကောင်ပေါက် (671 ± 54) (t(22) = 5.8; p = 0.01) အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (361 ± 45 voxels) (ရန်လှုပ်ရှားမှုဆွေမျိုးများ၏အကြီးဆုံးအတိုင်းအတာပြသသဖန်းသီး။ 3D), ဒါပေမယ့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ (t(22) = 1.8; p = 0.07) ။ လှုပ်ရှားမှု၏ဤပုံစံကို (NACC မှ OFC ဆွေမျိုးများ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖှံ့ဖွိုးတိုးတထင်ဟပ်သဖန်းသီး။ 4, ဂရပ်) ။
လှုပ်ရှားမှု၏ပျမ်းမျှအတိုင်းအတာများအတွက်ချိန်ညှိအားလုံးဘာသာရပ်များများအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် OFC များအတွက်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာ၏ပုံမှန်အတိုင်းအတာ, (x - ယုတ် / ဒေသတစ်ခုချင်းစီ) ကိုဆိုလိုတာ။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးအာရုံကြောစုဆောင်းမှုအတွက် differential ကိုအပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ဖို့ကျနော်တို့နှင့်အတူ NACC သို့မဟုတ် OFC အတွက် MR signal ကိုအပြောင်းအလဲပေါ်မှာအချိန် (အစောပိုင်း, အလယ်တန်းနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုတွေ) ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်နှင့် interaction က။ အချိန်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို (accumbens အတွက်ဆုလာဘ်တို့ကအုပ်စုတစ်စုအားဖြင့်သာအချိန်အပြန်အလှန်လေ့လာခဲ့သည်F(8,136) = 3.08; p အဆိုပါ OFC အတွက်လျော့နည်းစေ့စ့စပ်စပ် = 0.003) နှင့် (F(8,136) = 2.71; p = 0.02) ။ ဒါဟာအပြန်အလှန်မှာရရှိနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုများ၏နှောင်းပိုင်းကစမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများကို (အစောပိုင်း, အလယ်တန်းတစ် function ကိုအဖြစ်အပြောင်းအလဲများကိုနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့, ဖြည့်စွက်ပုံ။2တွေ့မြင်ကအဓိကအားဖြင့်မောင်းနှင်ခဲ့သည် www.jneurosci.org as ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း). ကိန်းဂဏန်းများ5နှင့်6သေးငယ်အလတ်စားတစ် function ကိုအဖြစ် MR signal ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ယာယီသင်တန်းပုံဖော်နှင့်ဒေသတစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့ကနှောင်းပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်တန်ဖိုးများ။ ဤရွေ့ကားအချိန်စီးရီးသုံးခုစလုံးအသက်အုပ်စုများ MR signal ကိုတစ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြသသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အချက်အပြီး ~5-6 s ကိုဖြစ်ပေါ်သောအသေးစားနှင့်အကြီးစားဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက် accumbens လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပုံကြီးချဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပြ။ ဒီပုံစံအတွက်အသေးစိတ်သရုပ်ဖော်နေသည် ပုံ7ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက် (အားလုံးသုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအဘို့ဤအချိန်အမှတ်မှာ OFC လှုပ်ရှားမှုအတွင်းပြောင်းလဲမှုများအတွက်, ဖြည့်စွက်ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 3မှာရရှိနိုင် www.jneurosci.org as ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း).
သေးငယ်အလတ်စားတစ် function ကိုအတိုင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်ယာယီစသောအပြောင်းအလဲများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုသည်များအတွက်စမ်းသပ်မှု၏အနှောင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်တန်ဖိုးများ။ အဆိုပါမီးခိုးရောင်အရက်ဆိုင်တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်အမှတ် (s) ကို ~5-6 ့ကိုက်ညီတဲ့။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင် SEM ဖော်ပြသည်။ ခရေပွင့အုပ်စုများအကြား activation ကွဲပြားခြားနားမှုဖျောညှနျး။
တစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုသည်များအတွက်စမ်းသပ်မှု၏အနှောင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့, အသေးစားအလတ်စားနှင့်အကြီးစားဆုလာဘ်တန်ဖိုးများတဲ့ function ကိုအဖြစ် orbitofrontal cortex အတွက်ယာယီအပြောင်းအလဲများကို။ အဆိုပါမီးခိုးရောင်အရက်ဆိုင်တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်အမှတ် (s) ကို ~5-6 ့ကိုက်ညီတဲ့။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင် SEM ဖော်ပြသည်။ ခရေပွင့အုပ်စုများအကြား activation ကွဲပြားခြားနားမှုဖျောညှနျး။
အဆိုပါအသေးစားနှင့်အကြီးစားဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက် accumbens လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပုံကြီးချဲ့ပြောင်းလဲမှုဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စု pretrial အခြေခံဖို့တုန့်ပြန်ဆွေမျိုး, ပြီးနောက် MR signal ကို ~5-6 ့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှု။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင် SEM ဖော်ပြသည်။ ခရေပွင့အုပ်စုများအကြား activation ကွဲပြားခြားနားမှုဖျောညှနျး။
လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအပေါ်အချိန်များ၏သက်ရောက်မှု5(သေးငယ်တဲ့, အလတ်စားနှင့်အကြီးစားဆုလာဘ်) ×တစ်3(ပြေး) နဲ့စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်3(အဖွဲ့) ANOVA ×မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ယုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်မှီခို variable တွေကိုအဘို့နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုဆိုလိုတာ။ ဆုလာဘ်တန်ဖိုးအဓိကသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်F(2,72) = 9.51; p = 0.001) နှင့်အုပ်စုသည် (F(2,220) = 4.37; p အချိန်အားဖြင့်ဆုလာဘ်များ = 0.02) နှင့်သိသာထင်ရှားသော interaction က (F(8,288) = 4.176; p <0.001) နှင့်အချိန်အားဖြင့်ဆုလာဘ်အားဖြင့်အုပ်စုတစ်စု (F(16,272) = 3.01; p ယုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်များအတွက် = 0.01) ။ ဆုလာဘ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု, အားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးဆိုလိုတုံ့ပြန်မှုကြိမ်အကြီးဆုံးဆုလာဘ် (ဆိုလို, 515.47 ဖို့ပိုမြန်ခဲ့ကြကြောင်းပြသ; SD, 178.75; t(36) = 3.8; p <0.001) အလယ်အလတ်မှဆွေမျိုး (ဆိုလို, 556.89; SD က, 180.53) သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ် (ဆိုလို, 552.39; SD က, 180.35) ။ အချိန်အားဖြင့်သိသာသောဆုလာဘ်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအဓိကအားဖြင့်အုပ်စု၏သုံးလမ်းအပြန်အလှန်အားဖြင့်အချိန်ကာလအားဖြင့်ဆုလာဘ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည်ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုအချိန်တွင်ဆုသုံးမျိုးစလုံးနှင့်ကွဲပြားသောကွဲပြားမှုများကွဲပြားခဲ့သည်။သဖန်းသီး။ 8) ။ မြီးကောင်ပေါက်လတ်နှင့်အသေးဆုလာဘ်များအကြားမျှခြားနားချက်အတူအလတ်စားနှင့်အသေးစားဆုလာဘ်ဖို့ကြီးမားသောဆွေမျိုးမှသိသိသာသာပိုမြန်ခဲ့သညျ။ အမြိုးသားတို့, အသေးစားအလတ်စား, ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်မှယုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်မသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြသခဲ့သည်။ ယုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်သို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် accumbens သို့မဟုတ် orbitofrontal လှုပ်ရှားမှုအကြားမျှအရေးပါသောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။
အမူအကျင့်ရလဒ်များကို။ သေးငယ်အလတ်စားတစ် function ကိုအဖြစ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကိုဆိုလိုတာများနှင့်ကြီးမားသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးများကိုအစောပိုင်း, အလယ်တန်းများအတွက်ပြနေကြသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုသည်များအတွက်စမ်းသပ်မှု၏အနှောင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုတွေ။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင် SEM ဖော်ပြသည်။ ခရေပွင့လူကြီးများအတွက်ကြီးမားသောရန်အလတ်စားနှင့်အလတ်စားဆွေမျိုးမှသေးငယ်တဲ့ဆွေမျိုးမှဆယ်ကျော်သက်အတွက်သေးငယ်တဲ့မှဆွေမျိုးအသေးစားနှင့်အလတ်စားဆုလာဘ်မှနှေးကွေးတုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်နှေးကွေးတုံ့ပြန်မှုအချိန်ဖျောညှနျး။
ဆုလာဘ်ကိုမျှသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများ (ရှိခဲ့သည်F(2,72) = 0.26; p = 0.40), အုပ်စုတစု (F(2,220) = 0.73; p = 0.80), သို့မဟုတ်အချိန် (F(4,476) = 0.57; p = 0.44) သို့မဟုတ်ယုတ်တိကျမှန်ကန်မှုအဘို့အ interaction က။ အလတ်စား, 96%;; ကြီးမားသော 98%; မြီးကောင်ပေါက်သေးငယ် 96%: သေးငယ် 98%; အလတ်စား, 99%; ကြီးမား 99%; နှင့်လူကြီးများ: အားလုံးဘာသာရပ်များဆုလာဘ်တန်ဖိုးများ (ကလေးများကိုဖြတ်ပြီးမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုခဲ့သေးငယ် 98%; အလတ်စား, 99%; ကြီးမား 99%) ။
ဒီလေ့လာမှုကဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးတန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရေးဆုချဖို့အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် (ယခင်ကဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေဒေသများ, မြီးကောင်ပေါက် NACC နှင့် OFC စုဆောင်းမှုအတွက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားသောငါတို့အယူအဆကိုထောကျပံ့Knutson et al ။ , 2001) နှင့်စွဲလမ်း (Volkow et al ။ , 2004) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို (ကြွက်နှင့်ကိုက်ညီများမှာLaviola et al ။ , 2003) နှင့်ယခင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံရိပ် (Ernst et al ။ , 2005မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးမြှင် accumbens လှုပ်ရှားမှု၏) လေ့လာမှုများ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သည်ဤဒေသများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အ function ကိုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ
Enhanced accumbens လှုပ်ရှားမှုကလေးများဆွေမျိုး, ဒါပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးအလားတူမြီးကောင်ပေါက်အဘို့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသန့်စင်ပြီးပုံစံအားဖြင့် paralleled ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်ကလေးများပိုမိုဆင်တူပိုပြီးပျံ့ OFC စုဆောင်းမှုပြသခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ NACC ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း OFC ၏အရင်အဦးနေရာစေခြင်းငှါအကြံပြုဤဒေတာကိုအနက်ကိုဘော်ပြ။ ပျံ့ထံမှ focal စုဆောင်းမှုတစ်ခုအကူးအပြောင်းနှင့်အတူ prefrontal ဒေသများရှည်လျားဖွံ့ဖြိုးရေး, MRI-based neuroanatomical နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (Sowell et al ။ , 1999; 2003; Gogtay et al ။ , 2004) နှင့် fMRI လေ့လာမှုများ (ကာဇီ et al ။ , 1997, 2002; ဘရောင်း et al ။ , 2005, Durston et al ။ , 2006) (prefrontal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကာဇီ et al ။ , 2005).
frontostriatal ဒေသများအတွင်းလှုပ်ရှားမှု volume ထဲမှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (Sowell et al ။ , 1999) ဒီကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လူသိများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဥပမာ, dendritic Arbore, Synaptic တံစဉ်များကို, myelination) ၏အလငျး၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် fMRI မဟုတ်သလို MRI မချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေရဲ့ယန္တရားရဲ့အနှစ်သာရကမှအရာတွေနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အဆင့်အထိကိုပေး။ အဆိုပါအသံအတိုးအကျယ်အတိုင်းအတာပြင်းအားကွဲပြားခြားနားမှု၏အနက်ကိုအကျပ်ကိုင်ဖို့အစိတ်အပိုင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က NACC နှင့် OFC ၏လှုပ်ရှားမှု၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ပြင်းအား၌အကြှနျုပျတို့၏အပြောင်းအလဲအတွေ့အကြုံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူဤ circuitry တစ်ဒဏ်ငွေ-tuning ထင်ဟပ်သာမှနျးနိုငျသညျ။
frontostriatal ဒေသ differential စုဆောင်းမှုအများအပြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ fMRI လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသတင်းပို့ခဲ့ပြီး (ကာဇီ et al ။ , 2002; ဘုန်းတော်ကြီး et al ။ , 2003; သောမတ်စ် et al ။ , 2004) ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤတွေ့ရှိချက်နု prefrontal ဒေသများထက် prefrontal နှင့် subcortical ဒေသများအကြားတစ်ဦးမညီမမျှ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနက်ပါပြီ။ (ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းအတွက်သင့်လျော်တဲ့လုပ်ရပ်တွေလမ်းညွှန်အတွက် prefrontal ဒေသသက်သေအထောက်အထားပေးထားMiller နဲ့ Cohen ကို, 2001) နု prefrontal လှုပ်ရှားမှုအနာဂတ်ရလဒ်များနှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု၏အကဲဖြတ်၏သင့်လျော်သောခန့်မှန်းချက်သည်ဆီးတားခြင်းငှါ, နှင့်အရှင် accumbens ထက်ဆုလာဘ်အဘိုးပြတ်အပေါ်လျော့နည်းသြဇာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုရေရှည်အကျိုးအမြတ်ကျော်ချက်ချင်းအားဖြင့် biased အခါဒီပုံစံ (cortical လှုပ်ရှားမှုမှဆွေမျိုး, မြင့်မားသော subcortical ဖေါ်ပြခြင်းယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်လူယာ et al ။ , 2004) ။ ထို့အပွငျ accumbens လှုပ်ရှားမှု (အပြုသဘောနောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေနဲ့အတူပတျသကျပြထားပြီးKuhnen နှင့် Knutson, 2005).
ဒီလေ့လာမှုတစ်ခုမှာရည်မှန်းချက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ်သင်ယူမှုရဲ့အနှစ်သာရကဖို့ပဲ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြီးဆုလာဘ် cue မှအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူသုံးယောက်တွေကိုမှအမူအကျင့်ခွဲခြားပြသခဲ့ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်လျော့နည်း discrete တုံ့ပြန်မှုနှင့်ကလေးများအဘယ်သူမျှမသင်ယူမှုအနည်းငယ်သာပြသပြသခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြတ်ပြီးပိုနှေးတယ်သင်ယူမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆုလာဘ်ရလဒ်များအကြားဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုသည်ဆီးတားစေခြင်းငှါအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး OFC ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံရိပ်ရလဒ်များကိုမှုနဲ့အပြိုင်။ ဤသည်အနက် (တိရစ္ဆာန်အများကထောက်ခံနေသည်Hikosaka နှင့် Watanabe, 2000; Chudasama နှင့် Robbins, 2003; Cetin et al ။ , 2004; Hosokawa et al ။ , 2005) နှင့်လူ့ပုံရိပ် (Elliott သည် et al ။ , 2000; O'Doherty et al ။ , 2003; လူယာ et al ။ , 2004; ကော့ et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) လေ့လာမှုများသင်ယူမှုအတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖေါ်ပြခြင်းနဲ့ရှေးခယျြမှုအပြုအမူအကောင်းဆုံးအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ရပ်များ (လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှု) နှင့်ဆုလာဘ်ရလဒ်များအကြားလင့်များကိုယ်စားပြု။
ယနေ့အထိဆုလာဘ်များအနည်းငယ်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ဆုလာဘ်ရလဒ်ကိုတစ် function ကိုအဖြစ်အပြုအမူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါပြီHaruno et al ။ , 2004; Delgado et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) ။ ဤတွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဆုလာဘ်-related အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအပြုအမူ output ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအမူအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်အခြေအနေများအမူအကျင့်ကို output နေကြပါတယ်ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်ကနေယခင်စာရေးဆရာများ precluded ကြပေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရာဒိုင်းတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်အချိန်ဇယားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်သင်ယူမှုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုဆိတ်ကွယ်ရာမာရ်နတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်အကြောင်းရင်းတစ်ခု (ဖြစ်စေခြင်းငှါ,Dickinson နှင့် Mackintosh, 1978; Gottlieb, 2004, 2005) ။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ (ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအားဖြည့်အချိန်ဇယားဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွေမျိုးနှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်သင်ယူမှုကိုပြသGottlieb, 2004) ထိုဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးကြီးမားသောဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေဖို့ပိုမြန်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုတွေအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်တစ်ဦးချင်းစီဆုလာဘ်တန်ဖိုးအပြုအမူများ၏ကွဲပြားပုံစံကရှင်းပြသည်ကြပေမည်။
ဆုလာဘ် preference ကို (အကျိုးကိုအခြေအနေတွင်အပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသည်Tversky နှင့် Kahneman, 1981; Tremblay နှင့် Schultz, 1999) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကနေသက်သေအထောက်အထားဆွေမျိုးဆုလာဘ် preference ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပုံကြီးချဲ့ကြောင်းအယူအဆထောက်ခံပါတယ်: မြီးကောင်ပေါက်ကြီးဆုလာဘ်များနှင့်အခြားဆုလာဘ်ဖို့သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်ဆွေမျိုးဖို့နဲ့အခြားအသက်အရွယ်မှလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားဖို့မြှင့်တင်ရန် accumbens တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက် (ကအနိုင်ရရှိခွအေနအေစဉ်အတွင်းလူကြီးများထက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ BOLD signal ကိုပြင်းထန်မှုပိုမိုပြင်းထန်မှုသတင်းပို့Ernst et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက် (ယခင်က striatal လှုပ်ရှားမှုလျော့ပြ, ပေးထားသောအချိန်ကမျှော်လင့်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်၏မရှိခြင်းဆင်တူဆုလာဘ်တစ်ခုပျက်ကွက်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်, ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပေမည်Davidson et al ။ , 2004) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ကဒီအခွအေနေဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပိုပြီးအနုတ်လက္ခဏာအဖြစ်ကိုရိပ်မိပါပြီစေခြင်းငှါအပိုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုအစောပိုင်းကနေသေးငယ်ဆုလာဘ်အဘို့အနှောင်းပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုတွေမှတုံ့ပြန်မှုအချိန်နှေးဖို့စာအဆက်အသွယ်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်များ (ဆုလာဘ်အမြင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံကြောစနစ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများကလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဆိုလိုIrwin, 1993).
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုသင်ယူမှုနှင့်အတူအပြောင်းအလဲများကို Parallel စခွေငျးငှါ
မကြာသေးမီက Pasupathy နှင့် Miller က (2005) မျောက်များအတွက် striatal ဒေသများပြီးတော့အရေးယူသို့ဘက်လိုက်မှု prefrontal ဒေသများသို့သလိုပဲသောပထမဦးဆုံးဆုလာဘ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်တွေ့ရှိသောပြသခဲ့သည်။ အခွားသောအလုပ် (အ OFC ရလဒ်များနှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုချိတ်ဆက်ခြင်းတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခံရဖို့ပုံရသည်ကြောင်းပြသထားပါတယ်Elliott သည် et al ။ , 2000; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) ။ သို့သော်ဤသက်ရောက်မှု (prefrontal စနစ်များနှင့် frontostriatal ဒေသများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ရင့်ကျက်အပေါ်မှီခိုဖြစ်နိုင်သည်Haber, 2003) ရလဒ်နဲ့တွဲဖက်လုပ်ရပ်များ, ယုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လုပ်ခဲ့တယ်သောအတိုင်းအတာအထိ, သင်ယူမှုမပြခဲ့ပါဘူး။ အကြောင်းမူကား, ဒါဟာအမြိုးသားတို့ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးများများအကြားသို့မဟုတ်သူတို့တစ်တွေကြီးမားဆုလာဘ်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူနည်းတူပျော်ရွှင်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိခွဲခြားတတ်ရန်သင်ယူနိုင်ဘူးရှိမရှိတစ်ပွင့်လင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနေဆဲဖြစ်သည်။
အငယ်ဘာသာရပ်များအတွက်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်ထက်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်လျော့နည်း sensitivity ကို၏တွေ့ရှိချက်များကိုအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကိုအပြုအမူအပြောင်းအလဲများအရင်အဦးနေရာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်သင်ယူမှုလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်နိုင်ပါသည် (Tremblay et al ။ , 1998) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အခြားဆုလာဘ်တန်ဖိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှု၏အဆုံးအားဖြင့်ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေမှသိသိသာသာပိုမိုမြန်ဆန်ခဲ့ကြပေမယ့် accumbens အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆင်တူတစ်ခုချင်းစီဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုမှလှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားပုံစံများပြသခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဤရှင်းပြချက်သည်မှန်ကန်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်ဆင့်လေ့ကျင့်မှုဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်သည်နောက်ဆုံးတွင်သက်တမ်းတိုးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကလေးငယ်များတွင်အလားတူပုံစံများပေါ်ထွက်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသော်လည်းပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလေ့ကျင့်မှုဖြင့်ဖြစ်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပုံကြီးချဲ့ accumbens တုံ့ပြန်မှုအဲဒီ replicates ပေမယ့် et al စေသော။ (2004) နှင့် Ernst et al ။ (2005), Bjork et al ။ (2004) တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိအမြတ်ဆနျ့ကငျြဘနှိုင်းယှဉ်တစ်အမြတ်စဉ်အတွင်းလူကြီးများမှဆွေမျိုး accumbens လှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ Bjork et al သွားရမည်။ (2004) တစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်မှုကျော် MR signal ကိုပြောင်းလဲမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေလူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ် activation ဖေါ်ပြခြင်းနှင့်အတူအစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းမှာလည်းတစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်မှုဖြတ်ပြီး MR အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ပါ။
လက်ရှိစာပေမှဆွေမျိုးလက်ရှိလေ့လာမှုမှာတစ်ဦးကစက္ကန့်ခြားနားချက်, (O'Doherty et al ။ , 2001, Elliott သည် et al ။ , 2003, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005), ဘာသာရပ်များဖြတ်ပြီး OFC အတွက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတစ်ဦးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်တှငျကြှနျုပျတို့အသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှင့်စမ်းသပ်မှုတလွှား OFC လှုပ်ရှားမှုပြိုကျ။ အဆိုပါ OFC ၏အခြားဆုလာဘ်လေ့လာမှုများဤဒေသတွင်လှုပ်ရှားမှုပျံ့နှင့်ပိုပြီး variable ကိုပုံစံများရှိသည်သောသူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေ, (မပါဝင်ကြပါပြီကာဇီ et al ။ , 1997) ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေထပ်တိုးအရှင် OFC လှုပ်ရှားမှုနည်းသောတသမတ်တည်းပုံစံများနှင့်အတူ, ဒီဒေသ၏စုဆောင်းမှုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာစမ်းသပ်မှု၏နောက်ပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့, OFC လှုပ်ရှားမှုငယ်များဆုလာဘ်မှပိုကြီးတဲ့ဆွေမျိုးများအတွက်ကွဲပြားပေမယ့်အသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးချင်းစီဆုလာဘ်တန်ဖိုးလှုပ်ရှားမှု discrete ပုံစံများပြသသော NACC မှတန်ဖိုးကိုဆွေမျိုးဆုချမယ့်ဒီထက်တိကျတဲ့မြေပုံပြကြောင်းပြသ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီအုပ်စုများ, (သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) နှင့်အခြားသူများကို၏ (Elliott သည် et al ။ , 2003).
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ subcortical ဒေသများမှဆွေမျိုးအထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအတွက်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲရှိတယ်လို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာ (ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များထက်အစာစားချင်စိတ်စနစ်များအားဖြင့်ပိုပြီးမောင်းနှင်ခံနေရမြီးကောင်ပေါက်အတွက် suboptimal ရွေးချယ်မှုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါလှံ, 2000) ။ ဆုလာဘ်-related mesolimbic circuitry ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနားလည်ခြင်းထပ်မံတိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းစွဲ၏ neurobiological အခြေခံပေါ်မှာလယ်ပြင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကဒီမှာအဆိုပြုတဆင်တူတစ်ဦးကအာရုံကြောမူဘောင်စွဲရှင်းပြဖို့အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါ PFC ကြောင့်နိုင်ခြင်းသင့်လျော်စွာအနာဂတ်အကျိုးဆက်များ (များ၏အခြေအနေတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ modulate ဆပ်လိမ့်မယ်အရာတခုထကြွလွယ်သော subcortical စနစ်, နေဖြင့် "ပြန်ပေးဆွဲ" ဖြစ်ပါတယ်Bechara, 2005) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ဒီထင်ကြေးတွေနဲ့ကိုက်ညီပေမယ့်ပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစနစ်များ prefrontal မှ subcortical စနစ်များကိုဆွေမျိုးများ၏အချိုးအစားမမျှတပံ့ပိုးမှုများကိုဆင်းရဲသားတို့ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှဆယ်ကျော်သက် predisposes ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်, နောက်ဆုံးမှာ, စွဲအခြေခံလိမ့်မည်။
Received ဇန်နဝါရီလ 5, 2006 ။
တည်းဖြတ်မူလက်ခံရရှိ , 15 2006 နိုင်ပါစေ။
လက်ခံ , 25 2006 နိုင်ပါစေ။
↵a အဆိုပါ accumbens နှင့် OFC များအတွက်6နှင့် 10 ၏စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစားအသီးသီးဤ Simulator ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်နှင့်ကလေးဒေတာအတွက် 8 နှင့် 10 ၏စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစားအသီးသီး, (ပိုပြီးတင်းကြပ်တံခါးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်p <0.002 နှင့် p <0.001, အသီးသီး) ။ OFC တွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ကလေးသူငယ်များတွင် ၁၄ နှင့် ၁၈ အရွယ်တို့၏အရွယ်အစားသည်ပိုမိုတင်းကြပ်သောကန့်သတ်ချက်များမှရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်။p <0.004 နှင့် p <0.001, အသီးသီး) ။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထောက်ပံ့ရေး R01 DA18879 နှင့် R21 DA15882, အမျိုးသား Institute မှစိတ်ကျန်းမာရေး၏ Grant က P50 MH62196 (BJC), နှင့်အမျိုးသားမျက်စိဌာန Institute Grant က T32 EY07138 မိတ်သဟာယဖွဲ့ (AG က) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်လျက်ဒီလေ့လာမှုနဲ့သုံးအမည်မသိသုံးသပ်ရေးအတွက်ပါဝင်များအတွက်သင်တန်းသားများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအားလုံးအသိအမှတျပွု။
စာပေးစာယူ Adriana သွပ်ရည်စိမ်သို့မဟုတ် BJ Casey, 1300 York မြို့ရိပ်သာလမ်း, Box ကို 140, နယူးယောက်, NY 10021 ဖြစ်စေမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] or [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Bechara တစ်ဦးက (2005) ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံး: တစ် neurocognitive ရှုထောင့်။ နတ် neuroscience 8:1458-1463 ။
Bjork JM, Knutson B, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, Hommer DW (2004) မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: တူညီနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို neuroscience 24:1793-1802 ။
Boynton GM က, အိန်ဂျယ်လုပ် SA, ဂလိုဗာ GH, Heeger DJ သမား (1996) လူ့ V1 အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်၏ linear စနစ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို neuroscience 16:4207-4221 ။
ဘရောင်း TT, သည်များ HM, Coalson RS, Miezin FM ရေ, Petersen SE, Schlaggar BL (2005) စကားလုံးမျိုးဆက်များအတွက်လူ့ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ Cereb Cortex 15:275-290 ။
Bung S က, Dudukovic မိုင်, Thomason ME, Vaidya CJ, Gabrieli JD (2002) ကလေးများအတွက်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပံ့ပိုးမှုများကို: fMRI ထံမှသက်သေအထောက်အထား။ အာရုံခံဆဲလျ 33:301-311 ။
Burgund ED, Kang HC, ကယ်လီ je, Buckner RL, Snyder AZ, Petersen SE, Schlaggar BL (2002) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ fMRI လေ့လာမှုများအတွက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်တစ်ဘုံ stereotactic အာကာသ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ NeuroImage 17:184-200 ။
ကာဇီ BJ, Trainor R ကို, Orendi J ကို, Schubert တစ်ဦးက, Nystrom LE, Cohen ကို JD, Noll: D, Giedd J ကို, Castellanos X ကို, Haxby J ကို, Forman SD, Dahl RE, Rapoport JL (1997) တစ်ဦး Go ကို-အဘယ်သူမျှမ-Go ကိုတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း prefontal activation ၏တစ်ဦးကကလေးအထူးကုအလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု။ J ကို Cogn neuroscience 9:835-847 ။
ကာဇီ BJ, သောမတ်စ် KM, Davidson MC, Kunz K ကို Franzen P ကို (2002) တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှု Compatibility ကိုတာဝန်နှင့်အတူကြီးထွား striatal နှင့် hippocampal function ကို Dissociating ။ J ကို neuroscience 22:8647-8652 ။
ကာဇီ BJ, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA (2005) သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများ။ Curr Opin Neurobiol 15:239-244 ။
Cetin T က, Freudenberg က F, Fuchtemeier M က, Koch က M (2004) အဆိုပါ orbitofrontal cortex အတွက် Dopamine ကြွက်များတွင်အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအောက်မှာတုံ့ပြန်အော်ပရေတာကိုထိန်းညှိ။ neuroscience လက်တ 370:114-117 ။
Chudasama Y ကို, Robbins TW (2003) အဆိုပါကြွက်တိုကျရိုကျ cortex ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောများအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား: pavlovian autoshaping နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုဖို့ orbitofrontal နှင့် infralimbic cortex ၏ Dissociable ပံ့ပိုးမှုများကို။ J ကို neuroscience 23:8771-8780 ။
ကော့ RW (1996) AFNI: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု neuroimages ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် visualization များအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ။ ကွန်ပျူတာက Biomed Res 29:162-173 ။
ကော့သည် SM, Andrade တစ်ဦးက, Johnsrude IS (2005) conditional ဆုလာဘ်လူ့ orbitofrontal cortex များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့သင်ယူခြင်း။ J ကို neuroscience 25:2733-2740 ။
Cromwell HC, Schultz W က (2003) မျောက် striatum အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်ပြင်းအားများအတွက်မျှော်လင့်ချက်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ J ကို Neurophysiol 89:2823-2838 ။
Davidson MC, Horvitz JC, စပါး N ကို, Fossella ဂျာ Watts R ကို, Ulug တစ်ဦးက, Casey B ကို (2004) မမျှော်လင့်ဘဲ nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုအောက်ပါ differential cingulate နှင့် caudate activation ။ NeuroImage 23:1039-1045 ။
Delgado MR, Miller က M ကို, Inati S က, Phelps ကို EA (2005) ဆုလာဘ်-related ဖြစ်နိုင်ခြေသင်ယူမှုတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ NeuroImage 24:862-873 ။
Dickinson တစ်ဦးက, Mackintosh N ကို (1978) တိရစ္ဆာန်များအတွက်နျ Classical အေးစက်။ Annu ဗြာ Psychol 29:587-612 ။
Durston S က, Davidson MC, စပါး N ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Spicer J ကို, Fossella ဂျာကာဇီခ (2006) ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှပျံ့ထံမှတစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ။ dev မှသိပ္ပံ 9:1-8 ။
Duvernoy HM (1999) ခုနှစ်တွင်: အဆိုပါလူ့ဦးနှောက်: မျက်နှာပြင်, သုံးရှုထောင်အပိုင်း MRI နှင့်အတူခန္ဓာဗေဒနှင့်သွေးထောက်ပံ့ရေး Ed က2နယူးယောက်: Springer ။
Elliott သည် R ကို, Dolan RJ, Frith CD ကို (2000) အဆိုပါ medial နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex အတွက် Dissociable လုပ်ဆောင်ချက်များကို: လူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ Cereb Cortex 10:308-317 ။
Elliott သည် R ကို, Newman က JL, Long oa, Deakin JFW (2003) လူသားတွေအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ပေးရန် striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွက် differential တုံ့ပြန်မှုပုံစံများ: တစ် parametric အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ J ကို neuroscience 23:303-307 ။
Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, Jazbec SP, လူယာ eb, ရဟန်းတော် CS, Leibenluft အီး, တိုနီဘလဲ J ကို, ထင်းရူး DS (2005) လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ NeuroImage 25:1279-1291 ။
Forman SD, Cohen ကို JD, Fitzgerald က M, Eddy WF, မင်တန် MA, Noll DC က (1995) အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) တွင်သိသာထင်ရှားသော activation ၏တိုးတက်လာသောအကဲဖြတ်: တစ်စပျစ်သီးပြွတ်-size ကိုတံခါးခုံကိုအသုံးပြုခြင်း။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med 33:636-647 ။
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Davidson က M, Spicer J ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ (2005) လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုအတွက် ventral frontostriatal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience 25:8650-8656 ။
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, Castellanos FX, လျူ H ကို, Zijdenbos တစ်ဦးက, pause T က, အီဗန်, AC, Rapoport JL (1999) ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ နတ် neuroscience 2:861-863 ။
ဂလိုဗာ GH, Thomason ME (2004) BOLD fMRI အဘို့အလိမ်-In / ထွက်ပုံရိပ်တွေ၏တိုးတက်ပေါင်းစပ်။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med 51:863-868 ။
Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, Hayashi KM, Greenstein: D, Vaituzis AC အ, Nugent TF III ကို, Herman DH, Clasen LS, Toga AW, Rapoport JL, Thompson ကလေး (2004) အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 101:8174-8179 ။
Gottlieb: D (2004) ခို autoshaping အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်နှင့်အတူသိမ်းယူမှု။ ပြုမူနေသင်ယူပါ 32:321-334 ။
Gottlieb: D (2005) ကြွက်မဂ္ဂဇင်းချဉ်းကပ်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်နှင့်အတူသိမ်းယူမှု။ J ကို Exp Psychol Animation ပြုမူနေ Process ကို 31:319-333 ။
Haber SN (2003) အဆိုပါမျောက် Basal ganglia: အပြိုင်နှင့် Integrated ကွန်ရက်များ။ J ကို Chem Neuroanat 26:317-330 ။
Haruno M က, Kuroda T က, Doya K ကို Toyama K ကို Kimura M က, Samejima K ကို Imamizu H ကို, Kawato M က (2004) တစ်ဦး stochastic ဆုံးဖြတ်ချက်တာဝန်တစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: caudate နျူကလိယအတွက်ဆုလာဘ်-based အပြုအမူသင်ယူမှု၏တစ်ဦးကအာရုံကြော Correlate ။ J ကို neuroscience 24:1660-1665 ။
Hikosaka K ကို Watanabe က M ကို (2000) ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်နှင့်အတူကွဲပြားမျောက်များ၏ Orbital နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal အာရုံခံ၏နှောင့်နှေးလှုပ်ရှားမှု။ Cereb Cortex 10:263-271 ။
Hosokawa T က, Kato K ကို Inoue M က, Mikami တစ်ဦးက (2005) ယင်းဟာ Macaque orbitofrontal cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုဆုချမှ cue လှုပ်ရှားမှုစာပေးစာယူ။ neuroscience လက်တ 389:121-182 ။
Hyman SE, Malenka RC (2001) စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: အမလှူ၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ။ နတ်ဗြာ neuroscience 2:695-703 ။
Irwin J ကို (1993) ခုနှစ်တွင်: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်စွန့်စားမှုဆည်းပူးနေ: ဘယ်လိုသူတို့ related နေကြတယ် Newbury ပန်းခြံ,, CA: Sage ။
Kang HC, Burgund ED, သည်များ HM, Petersen SE, Schlaggar BL (2003) ဘုံ stereotactic အာကာသသုံးပြီးကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ activation foci ၏နှိုင်းယှဉ်။ NeuroImage 19:16-28 ။
Knutson B ကိုအဒမ် CM, Fong သည် GW, Hommer: D (2001) တိုးမြှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ J ကို neuroscience 21:1-5 ။
Kuhnen CM, Knutson B ကို (2005) ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ 47:763-770 ။
Laviola, G, Adriani W က, Terranova ML, Gerra, G (1999) လူ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက် Psychobiological အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 23:993-1010 ။
Laviola, G, Macri S က, Morley-ဖလက်ချာက S, Adriani W က (2003) စွန့်စားမှု-ယူပြီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်အပြုအမူ: psychobiological ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အစောပိုင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ 27:19-31 ။
Luna B, Sweeney ဂျေအေ (2004) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဦးနှောက် function ကိုပေါ်ပေါက်ရေး: တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ fMRI လေ့လာမှုများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1021:296-309 ။
Luna B, Thulborn KR, Munoz DP, Merriam EP, Garver Ke, Minshew NJ, Keshavan က MS, Genovese CR, Eddy WF, Sweeney ဂျေအေ (2001) ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေဦးနှောက် function ကို၏ရင့်ကျက်မှတ်ဉာဏ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ subserves ။ NeuroImage 13:786-793 ။
မေလ JC, Delgado MR, Dahl RE, Stenger တစ်ဦး, ရိုင်ယန် ND, Fiez ဂျာ Carter က CS (2004) ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက် circuitry ၏အဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 55:359-366 ။
လူယာသည် SM, Laibson ပစ, Loewenstein, G, Cohen ကို JD (2004) သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုချက်ချင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ 306:503-507 ။
Miller က ek, Cohen ကို JD (2001) prefrontal cortex function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ။ Annu ဗြာ neuroscience 24:167-202 ။
ဘုန်းတော်ကြီး CS, လူယာ eb, နယ်လ်ဆင် EE, Zarahn အီး, Bilder RM, Leibenluft အီး, Charney DS, Ernst M က, ထင်းရူး DS (2003) စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေအာရုံစိုက်-related ဦးနှောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျက်။ NeuroImage 20:420-428 ။
မောရှေသည် P ကို, သမင်ဒရယ် K ကို Buxton RB, Wong က EC အ, ဖရန့် LR, Stiles J ကို (2002) ကလေးများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏ functional MRI ။ NeuroImage 16:415-424 ။
O'Doherty J၊ Kringelbach M, Rolls ET, Hornak J, Andrews C (2001) လူ့ orbitofrontal cortex အတွက်စိတ္တဇဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုယ်စားပြုသည်။ နတ် neuroscience 4:95-102 ။
O'Doherty J ကို, Critchley H ကို, Deichmann R ကို, Dolan RJ (2003) လူ့ Orbital နှင့် ventral prefrontal cortical အတွက်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုကနေရလဒ်၏ valence Dissociating ။ J ကို neuroscience 23:7931-7939 ။
Pasupathy တစ်ဦးက, Miller က ek (2005) အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့ striatum အတွက်သင်ယူမှု-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများ။ သဘာဝ 433:873-876 ။
Pecina S က, Cagniard B, Berridge KC, Aldridge JW, Zhuang မှာ X (2003) Hyperdopaminergic Mutant ကြွက်ချိုမြိန်ဆုလာဘ်အဘို့အမြင့်မား "လို" ဘဲ "ကဲ့သို့" ရှိသည်။ J ကို neuroscience 23:9395-9402 ။
Rosenberg က D:, Lewis က DA (1994) နှောင်းပိုင်းတွင် postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းမျောက် prefrontal cortex ၏ dopaminergic innervation အတွက်အပြောင်းအလဲများ: တစ် tyrosine hydroxylase immunohistochemical လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 36:272-277 ။
Rosenberg က D:, Lewis က DA (1995) မျောက် prefrontal နှင့်မော်တာ cortical ရဲ့ dopaminergic innervation ၏ Postnatal ရငျ့: တစ် tyrosine hydroxylase immunohistochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို comp Neurol 358:383-400 ။
ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K ကို Overmeyer S က, တေလာအီး, Brammer M က, ဝီလျံက S, Simmons တစ်ဦးက, အန္ဒြေကို C, Bullmore E ကို (2000) အသက်အရွယ်နှင့်အတူ functional frontalisation: fMRI နှင့်အတူ neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာပုံဖော်။ Neursci Biobehav ဗြာ 24:13-19 ။
ငွေရောင် MM, Tzilos GK, Pimentel PJ, Yurgelun-Todd DA (2004) စိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်များ၏လမ်းကြောင်း: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်လိင်နှင့်အန္တရာယ်၏သက်ရောက်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1021:363-370 ။
Sowell ER, Thompson ကလေး, ကေတီဟုမ်း CJ, Jernigan TL, Toga AW (1999) တိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများတွင် Post-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အဘို့အ Vivo သက်သေအထောက်အထားအတွက်။ နတ် neuroscience 2:859-861 ။
Sowell ER, Peterson BS, Thompson ကလေး, SE, Henkenius AL, Toga AW မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် (2003) လူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် cortical ပြောင်းလဲမှုပုံဖော်။ နတ် neuroscience 6:309-315 ။
လှံကို LP သို့ (2000) အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 24:417-463 ။
Steinberg L ကို (2004) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ယူပြီးအန္တရာယ်: အဘယျသို့အပြောင်းအလဲ, ဘာကွောငျ့လဲ? အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1021:51-58 ။
Talairach J ကို, Tournoux P ကို (1988) ခုနှစ်တွင်: လူ့ဦးနှောက်၏ Co-ပြို stereotaxic Atlas နယူးယောက်: Thieme ။
သောမတ်စ် KM, Hunt က R ကို, Vizueta N ကို, Sommer T က, Durston S က, ယန် Y ကို, Worden က MS (2004) သွယ်ဝိုက် sequence ကိုသင်ယူမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏သက်သေအထောက်အထားများ: ကလေးများနှင့်လူကြီးများတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ J ကို Cogn neuroscience 16:1339-1351 ။
Tremblay K ကို Kraus N ကို, McGee T က (1998) မိန့်ခွန်း-သံကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းကာလအတွင်း neurophysiological အပြောင်းအလဲများကို: အာရုံသိမှုဆိုင်ရာအာရုံသင်ယူမှု၏အချိန်သင်တန်း။ NeuroReport 9:3557-3560 ။
Tremblay L ကို, Schultz W က (1999) မျောက် orbitofrontal cortex အတွက်ဆွေမျိုးဆုလာဘ် preference ကို။ သဘာဝ 398:704-708 ။
Tversky တစ်ဦးက, Kahneman: D (1981) ဆုံးဖြတ်ချက်များကို၏ဘောင်များနှင့်ရှေးခယျြမှု၏စိတ်ပညာ။ သိပ္ပံ 211:453-458 ။
Volkow ND, မုဆိုးဂျေ, ဝမ်, G, Swanson JM (2004) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုသက်ရောက်မှုတွေကနေရလဒ်တွေကို။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 9:557-569 ။
Zald DH, Boileau ငါ el-Dearedy W က, ဂွန် R ကို, McGlone က F, Dichter GS, Dagher တစ်ဦးက (2004) ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလူ့ striatum အတွက် Dopamine ဂီယာ။ J ကို neuroscience 24:4105-4112 ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်အဖြူအရေးပါဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: ပျံ့ Tensor Imaging နှင့် Meta-analytics ရလဒ်များ Schizophrenia သတင်းလွှာ, 1 နိုဝင်ဘာလ 2012, 38(6):1308-1317
ဆယ်ကျော်သက်များ၏စွန့်စားနိုင်သောအပြုအမူသည်မရေရာမှုများကိုသည်းခံခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်သည် PNAS, 16 အောက်တိုဘာလ 2012, 109(42):17135-17140
မောက်စ်နှင့်လူ့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြတ်ပြီးသင်ယူခြင်းပြောင်းလဲကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် PNAS,2အောက်တိုဘာလ 2012, 109(40):16318-16323
တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နှင့် Meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Update ကို: Ethnicity တစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ Dopamine receptor2TaqIA polymorphic နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအပြုအမူအကြားအစည်းအရုံး နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုတေသန, 18 စက်တင်ဘာလ 2012, 0(2012):nts196v1-nts196
မျိုးဗီဇ, မိခင်အဆိုးမြင်စိတ်တွေများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး: တစ် Gene က x ပတ်ဝန်းကျင် Interaction ၏အထောက်အထား လူငယ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် Juvenile တရားမျှတရေး, 1 ဇူလိုင်လ 2012, 10(3):245-260
အဆိုပါငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးအလုပ်တခုကို၏ကလေးတစ်ဦး-friendly version ကို၏ validation လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ,4ဇွန်လ 2012, 0(2012):nss057v2-nss057
Striatum-Medial Prefrontal Cortex ဆက်သွယ်မှုစစ်ကူသင်ယူအတွက် Developmental အပြောင်းအလဲများခန့်မှန်း ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇွန်လ 2012, 22(6):1247-1255
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကို၏ differential neurobiological ဆိုးကျိုးများ လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 ဇွန်လ 2012, 7(5):557-567
Striatum လူကြီးများနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားဆုလာဘ် process လုပ်တယ် PNAS, 31 ဇန်နဝါရီလ 2012, 109(5):1719-1724
Frontostriatal Interaction ၏ Modulation Serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါးအောက်မှာလျှော့မူလတန်းဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းနှင့်အတူ Aligns အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 25 ဇန်နဝါရီလ 2012, 32(4):1329-1335
မြီးကောင်ပေါက်မီဒီယာအကြမ်းဖက်မှုထိတွေ့မှု၏နံရံပစ်ကစားနည်း-parietal စည်းမျဉ်း: multi-နည်းလမ်းလေ့လာမှု လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 အောက်တိုဘာလ 2011, 6(5):537-547
အဆိုပါဖုံးမှ: ဆန္ဒပြည့် 40 နှစ်ပေါင်းနှောင့်နှေး၏အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်နောက်ပိုင်းတွင် PNAS,6စက်တင်ဘာလ 2011, 108(36):14998-15003
စိတ်ကြွရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက် Olfactocentric paralimbic cortex shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် ဦးနှောက်ကို, 1 ဇူလိုင်လ 2011, 134(7):2005-2012
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Synchrony နှင့်အကြီးစား-Scale ကို cortical ကွန်ယက်၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: အ Schizophrenia ၏ Pathophysiology နှင့် Neurodevelopmental Hypothesis ဘို့ဆက်နွှယ် Schizophrenia သတင်းလွှာ, 1 မေလ 2011, 37(3):514-523
မိဘပညာရေးလူကြီးအတွက် Corticostriatal လုပ်ဆောင်မှုခန့်မှန်း ဦးနှောက် Cortex, 1 ဧပြီလ 2011, 21(4):896-910
လှုံ့ဆော်အပြုအမူစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Prefrontal Cortex ၏အာရုံခံတားစီးနှင့်ညှိနှိုင်းရေးလျှော့ချ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 26 ဇန်နဝါရီလ 2011, 31(4):1471-1478
longitudinal မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူ့ cortical ရငျ့၏ဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်အချက်ပြ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပုံဖော် PNAS, 28 စက်တင်ဘာလ 2010, 107(39):16988-16993
ဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းနဲ့ဆယ်ကျော်သက်အတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်နု ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇူလိုင်လ 2010, 20(7):1613-1629
အဘယ်အရာကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လှုံ့ဆျောပေးသလဲ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြတ်ပြီးဆုကြေးအာရုံဖြန်ဖြေဦးနှောက်နေရာများ ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇန်နဝါရီလ 2010, 20(1):61-69
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်စွဲ: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရဲ့အမြင် စိတ်ရောဂါကုသမှု၏သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ဂျာနယ်, 1 နိုဝင်ဘာလ 2009, 43(11):1049-1056
Task ကို Set-Related Activation ၏ရင့်ကျက် Inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နှောင်းပိုင်း Developmental တိုးတက်မှုထောက်ပံ့ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,7အောက်တိုဘာလ 2009, 29(40):12558-12567
8 နှစ် 30 ကနေဦးနှောက်ရင့်ကျက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကလေ့လာမှု: Subcortical ဦးနှောက်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 23 စက်တင်ဘာလ 2009, 29(38):11772-11782
မြီးကောင်ပေါက်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုမှမိခင်တုံ့ပြန်မှုမြီးကောင်ပေါက် '' ဆုလာဘ် neuroanatomy နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, 1 စက်တင်ဘာလ 2009, 4(3):247-256
အတွေ့အကြုံအလယ်အလတ်ကြိုးကွောငျးဆငျခွအပြုအမူမှရှိသူများအတွက်မှသည် Shift: စိတ်ကနေစေ့စေ့ဖို့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 1 ဇူလိုင်လ 2009, 35(7):894-908
နှောင်းပိုင်းငယ်ဘဝကနေအစောပိုင်းလူကြီးဖို့ anterior Cingulate Functional ဆက်သွယ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဦးနှောက် Cortex, 1 မတ်လ 2009, 19(3):640-657
ယင်းအပျက်သဘောဆောင်သောအကဲဖြတ်သို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သောအကဲခတ်? ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်-အခြေပြုသင်ယူပံ့ပိုးအာရုံကြောယန္တရားများ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 17 စက်တင်ဘာလ 2008, 28(38):9495-9503
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်အန္တရာယ်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရား: သီအိုရီ, အလေ့အကျင့်များနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 1 စက်တင်ဘာလ 2006, 7(1):1-44